Uncategorized | HimiloNetwork
Himilo October 13, 2018	Leave a comment 308 Views
Tibet (Himilonetwork) – Isaga oo oogada sare ee badda ka sarreeya 3650 meters, Masjidka Hebalin oo sidoo kale la yiraahdo Lhasa oo ku yaalla gobalka Tibet ee dalka Shiinaha, waxaa loo arkaa mid kamid ah masaajidda uGu dheerdheer adduunka. Masjidkan oo la dhisay sannadkii 1716, waxaa dib u dayactir lagu sameeyey sannadkii 1959-kii. Masjidku wuxuu leeyahay saddex ilin oo laga soo ...
Himilo October 11, 2018	Leave a comment 720 Views
Pretoria (Himilonetwork) – Dalxiisayaal u baxay inay soo arkaan duurjoog ayaa la argagaxay aragtida haraadiga meydad dadeed oo ay ku xoonsan yihiin raxan libaaxyo ah. Kooxda dalxiisayaal ah oo ku socda goobta safari ayaa u yeeray booliska la dagaallama ugaarsiga si ay u ogeysiiyaan dhacdada. Nick Fox, oo ah milkiilaha safaariga Koofur Afrika ayaa sheegay in qeylo dhaan uu saakay maqlay ...
Himilo September 24, 2018	Leave a comment 279 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Cayilka ayaa la filayaa inuu ilaa sannadka 2043ka noqdo caqabad ka weyn sigaarka oo dumarka UK uu ku rido cudurka Kansarka, taasoo ka weyn xitaa sigaarka, wuxuuna noqon doonaa waxa ugu weyn ee mudan in laga hor tago, sida lagu saadaaliyay warbixin ay UK ka soo saareen koox cilmi baareyaal ah. Wakhti xaadirkaan, 12% ka mid ah haweenka ...
Himilo September 11, 2018	Leave a comment 300 Views
Bandung, Indonesia (Himilonetwork) – Subax walba waagu markuu dillaaco ilaa gabbal dhaca, 74-jirka lagu magacaabo Mr Sariban wuxuu – isaga oo raadinaya qashin jidadka yaalla – ku socdaa baaskiilkiisa waddooyinka magaalada – isaga oo canbaareeya kuwa qashinka mico darro ugu tuura jidadka. Markii uu bilaabayay samafalkan 30 sano kahor, dadku waxay moodi jireen inuu maskaxda ka xanuunsan yahay – ama uu waalli ...
Zakariya March 17, 2018	Leave a comment 268 Views
Kigali (Himilonetwork) – Dowladda Rwanda ayaa dalkeeda ka mamnuucday in aadaanka salaadaha loo adeegsado codbaahiyaal dheerdheer gudaha caasimadda Kigali. Marka loo eego dowladda, tallaabadani waxay qeyb ka tahay dadaal ay Rwanda ku dooneyso inay kaga hortagto buuqa ku furan hawada ‘noise pollution’. Waana qeyb kamid ah hiigsiga 2040-ka oo dowladdu ku dooneyso in magaaladu ku noqoto xarunta ganacsiga iyo dalxiiska ...
Zakariya March 15, 2018	Leave a comment 324 Views
Saudi (Himilonetwork) – Magaalada Madina al-Munawarah oo caan ku ah dhowr ceelal oo ka qodan kuwaas oo xiriir la leh socdaalladii uu Suubanaha ku mari jiray waxaa kamid ah Ceelka Uthman ibn Affan oo loo yaqaan Rummat – kaas oo 1400 oo sannadood kadib sidiisii looga cabo. Hareeraha Ceelka waxaa ku yaalla masjid, waxaana ku beeran geed timireed badan iyo kuwa kale ...
Zakariya March 13, 2018	Leave a comment 286 Views
Delhi (Himilonetwork) – Gacan-ku-dhiiglayaasha iyo af-duubatada kuwaas oo aan qabin dareen argagax leh oo la xiriira xukun-sugistooda, hadda waxay ku shamuumayaan buugaagta u taalla qolalka xabsiyada dhaca dhulka Mahatma Gandhi si ay wax ugu bartaan. Xaqiiqdii, Xabsiga Dhexe ee Ahmedabad oo ah degmo kamid ah gobalka Gujurat oo uu kasoo jeedo RW Narendra Modi – kaas oo caan ku ahaa ...
Zakariya March 13, 2018	Leave a comment 759 Views
Berlin (Himilonetwork) – Intii u dhaxeysay bilihii Janaayo iyo Agoosto sannadkii 1945-kii, dadka Jarmalka waxay indhahooda ku arkeen dhacdadii ugu xanuunka badneyd kufsi-wadareedka taariikhda la hayo oo dalkaas ka dhacday – halkaas oo tiro lagu qiyaasay laba milyan oo haween Jarmal ah ay kufsadeen Ciidankii Casaa ee Midowgii Soofiyeeti, sida uu Buuggiisa Beyond Duty uu ku qoray qoraaga Walter Zapotoczny. ...
Zakariya March 13, 2018	Leave a comment 710 Views
MAKKA (Himilonetwork) – Mokhtar Alim Shaqdar waa naqshadeeyaha ama farshaxamiistaha rasmiga ah ee Kiswa – oo ah marada madow ee lagu dado Kacbada Barakaysan. Shaqdar wuxuu shaqadan kala wareegay Abdulraheem Bokhari, oo sanadkii 1996-kii ku dhintay da’da 90-jirka. Shaqdar wuxuu ku biiray dugsiga lagu barto farshaxanka Masjidka Weyn sannadkii 1978-kii halkaas oo uu laba sano ku qaatay ku taqasuskeeda. Waqtigaas ...